Noho ny fivarinan’ny riaka: ahina ho tapaka tanteraka ny lalana mankany Ambatondrazaka | NewsMada
Noho ny fivarinan’ny riaka: ahina ho tapaka tanteraka ny lalana mankany Ambatondrazaka
Isan’ireo orinasa malagasy hany mba mandeha tsara ny Fanalamanga. Antenaina hanitatra haingana kokoa ireo alan-kesika 78.000 ha sy alan-kininina 4.000 ha, lova navelan’ny filoha Tsiranana Philibert, ho an’ny Malagasy, nokolokoloin’ity orinasa ity nandritra ny 40 taona. Toerana noheverin’io raiamandrenibe voalaza io, ho isan’ny arovana ka tokony volen’ny Fanalamanga hazo, ny manodidina sy any andrefan’Andranokobaka, kaominina Andilanatoby, distrikan’Ambatondrazaka.
Tsy tia mamboly kesika ny mponina any nefa ahitana izany tsirairay maniry eny amin’ireo lavaka mangodàna marobe amin’izao fotoana izao. Milaza izay zava-misy izay fa efa manandrana mandrakotra hazo iny faritra tena tandindomin-doza iny ny mponina any amin’ny faritra manodidina.
Tafavoaka hatrany amin’ny farihin’Alaotra ireo tanimena entin-driaka avy amin’ireo lavaka ireo, ohatra, ny avy any Ambohimena-Gara. Antsoin’ny mpitondra fiara hoe “loza mahafaty” mihitsy io toerana io ary ahina ho tapaka tanteraka ny lalana RN-44, mankany Ambatondrazaka, noho ny fivarinan’ny riaka. Tsy misy fiviliana azo atao, nefa tsy andraikitry ny orinasa Fanalamanga mihitsy kosa ny lalana !
Miantso vonjy amin’ny Fanalamanga
Fa ny resaka nifanaovana tamin’ny tale jeneralin’ny Fanalamanga, Rakotonirina Augustin, nandritra ny foara “Tangorona II” farany teo, tao Ambatondrazaka, nandrosoana ny hevitra taminy ny hanaovan’ny orinasa tarihiny fiaraha-miombon’antoka amin’ny fokonolona momba ny fambolen-kazo, hampijanona ny fiitaran’ireo lavaka sy tevana marobe eny amin’ireo havoana sy vohitra. Efa fomba fiasa mandaitra sy mahomby fanaon’ity orinasa ity ihany izany any Antsirinala, any Analabe, any Soalazaina, sns. Miteraka asa fampidiram-bola ho an’ny mponina sy ho fitaizana azy ireo koa.